Inona no maharatsy ny mainty hoditra SEO? Fanontaniana momba ny Semalt Expert
Fantatsika fa ireo webmasters isan-karazany dia mampiasa teknolojia mainty SEO hanatsarana ny laharan-keviny ao amin'ny rindrambaiko . Mampiasa fomba maro izy ireo mba hahatongavana any an-tampon'ireo fitaovam-pikarohana ary ratsy.
Eto i Igor Gamanenko, manam-pahaizana ambony avy amin'ny Semalt , dia hanome anao toro-hevitra mikasika ny fomba hahafantarana ny hatsarana mainty SEO hahazoana toerana tsara ho an'ny tranokalanao ao amin'ny aterineto.
Blackhat SEO dia teknika tsy ara-dalàna hamoronana traikefa finday. Betsaka ny rohy manorina, ary ny lahatsoratra momba ny vatoaratra dia novolavola amin'ny fitsipika sy fitsipika momba an'i Google. Ny tranonkalanao dia ho voararan'ny fitaovan'ny fikarohana raha toa ianao ka tafiditra ao anatin'ireo teknolojia mainty SEO. Mety hosaziana ianao ary tsy maintsy miatrika olana marobe amin'ny famoahana ny aterineto. Ireo lahatsoratra amin'ny tranonkala toy izany dia nosoratana raha tsy misy ny kalitao. Manana hadisoana sy fitsipi-pitenenana maro ireo andalana ireo, ary ireo teny fanalahidy dia ampiasaina eto sy any. Mandritra izany fotoana izany, ny manam-pahaizana SEO sasany dia nanaiky ny SEO hanesorana ny mpanjifany, toy ny syndiq8.com, ary blachhatseo.com. Raha mampiasa ny tolotr'ireo orinasa ireo ianao dia mety tsy hahazo ny vokatra irinao.
Marina fa ireo mpampiasa aterineto dia samy nahatsapa ny mailaka rehetra..Maharay mailaka miaraka amin'ny hafatra mifono hafatra sy fifandraisana. Tena ilaina ny manalavitra ireo mailaka ireo. Ankoatra izany, tokony tsy tokony hiantehitra amin'ireto fitaovana ireto ianao. Ny tenifototra tenimiafina, spam motera fikarohana, ary lahatsoratra spam dia ireo teknika telo lehibe amin'ny kapa mainty SEO.
Ny SEO dia tsy ratsy
Mijery tsara ny motera fikarohana raha nanao ny fotsy fotsy SEO na mainty SEO SEO. Ny fametrahana ny tranokalanao dia miankina amin'ny paikady nampiasainao hatramin'izao. Zava-dehibe ny hiatrehana ireo fahalemena ary hanaisotra ny hatsaran'ny mainty SEO raha te-hanatsara ny orinasanao amin'ny aterineto. Blackhat SEO dia afaka manatsara ny laharan'ny toerana misy anao, saingy tsy mahasoa anao izany raha toa ka handrara sy hanasazy ny tranokalanao ny milina fikarohana ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Tsy ireo milina fitadiavana izay manavaka ireo tranonkala tsara sy tranonkala ratsy. Ny orinasa anananao dia feno mpikaroka tranonkala efa za-draharaha , mpivarotra, ary olon-tsotra mpampita vaovao. Azonao atao ny mifandray amin'ny olona izay manao zavatra ara-dalàna. Amin'ny ankapobeny, ny SEO dia tsy ratsy satria misy lafiny maizina sy mamirapiratra. Ny sisiny mainty dia rehefa manao SEO ianao, ary ny fotsy hoditra dia rehefa mifidy fotsy SEO ianao.
Ho an'ireo izay mandray anjara amin'ny teknolojia SEO, dia manoro hevitra isika fa tokony hialan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Izany dia satria tsy hisy vokany ny ezaka ataon'izy ireo. Ny tranonkalan'izy ireo dia tsy afaka mahazo loka matihanina tsara, ary tsy afaka miteraka fitarihana.
Ny fanao tsy miangatra
Ireo manam-pahaizana amin'ny mainty hoditra SEO dia tafiditra amin'ny fomba fanao tsy ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. Saingy tokony hitadidy fa ireo tranonkala izay saziana sy voarara amin'ny fitaovam-pikarohana dia tsy hatsembohana mainty. Indraindray ireo mpandraharaha dia tsy mahatakatra ny karazana paikady izay mifanaraka amin'ny toerana misy azy Source .